Mozilla Thunderbird 60, vhezheni itsva yeimwe yevanonyanya kuzivikanwa email vatengi | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla Thunderbird 60, vhezheni nyowani yeimwe yevanonyanya kuzivikanwa email vatengi
Nezuro hatina kungonzwa chete nyaya dzisingafadzi dzeramangwana shanduko mukati meFirefox maererano neCloudflare's dns asi takapihwawo vhezheni itsva yeMozilla Thunderbird, Mozilla Thunderbird 60.
Iyi vhezheni itsva yeThunderbird ndeyechokwadi kuvandudzwa kweiyi email mutengi, iyo iri Gnu / Linux, yakaramba iri imwe yeakanakisa email vatengi varipo.Iyo nyowani vhezheni yeThunderbird ine chitarisiko chitsva zvachose. Kunze kwekuve uine hwaro hweazvino vhezheni yeFirefox, Thunderbird ine madingindira maviri matsva, rimwe rakasviba uye rimwe iro mwenje iro rinopa iyo pfungwa yekuonekwa patsva. Karenda yacho yakaverengerwa musimboti rekushandisa, kuve chikamu chemutengi. Zvakare, ichi chiitiko chaive chiripo kuburikidza ne plugin mune yapfuura shanduro, ikozvino inokutendera iwe kurondedzera iro zuva kunzvimbo.
Muchikamu cheemail, Mozilla Thunderbird 60 ine dzinoverengeka zvigadziriso, asi kwete huru nhau. Mozilla Thunderbird 60 inobvumira kugadzira maemail templates uye kugona kutumira maemail kuburikidza nema templates ane bhatani rinozoonekwa mune yeemail paneli. Iyo itsva vhezheni inosanganisirwa iyo OAuth2 protocol uye kuenderana neYahoo! uye maAOL maemail account.
Izvi ndezvimwe zvezvinhu zvitsva zveiyi vhezheni itsva, vhezheni iyo vazhinji vakamirira kwenguva yakareba, asi havazi ivo voga. Mu kusunungura manotsi tinogona kuwana shanduko dzese dzeshanduro iyi nyowani.
Kana isu tine Mozilla Thunderbird uye isu tine rolling kuburitswa kwekuparadzira, unogona kunge watoona vhezheni itsva pakombuta yako. Kana iwe uine isina-kutenderera kugovera, seUbuntu, ichave iri nyaya yemazuva apo isu tinogamuchira iyo nyowani vhezheni uye isu tinogona kugara tichienda ku iyo webhusaiti yechirongwa uye dhawunorodha vhezheni itsva kuti uishandise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mozilla Thunderbird 60, vhezheni nyowani yeimwe yevanonyanya kuzivikanwa email vatengi
Joseph Louis Mateo akadaro
Nhasi iyo Firefox v. 62 yanga yakakwana uye iyo Thunderbird v.60 iyo yaisa muChirungu pasina mukana wekudzosera mutauro yaonekwa muLinux Mint kurodha pasi / kugadzirisa.
Kana paine chero munhu anokwanisa kundibatsira, ndingafare zvikuru
Pindura kuna Jose Luis Mateo
Vashandisi veLenovo Vachazopedzisira Vavandudza Gnu / Linux Inoenderana Firmware
WiFi hostapd AP chishandiso chekugadzira iyo Wifi yekuwana mapoinzi muLinux